Warbixin xiiso leh oo Wargeyska The Guardian Ka Qortay Somaliland | Somaliland.Org
August 26, 2011	London (Dawan)- “Dawladda Somaliland iyada oo ka tashatay taageerada maaliyadeed ee muwaadiniinteeda iyo ganacsatadeeda, ayaa waxa ay dalkeeda ka hirgelisay degganaansho iyo dimuqraadiyad, sidaasi waxa qortay jariidada ‘Guardian’ ee ka soo baxda London. Jariidadu waxa ay tilmaantay in ay Somaliland tallaabo u qaaday xagga wanaagga markii ay dawladdeedu dhawaan ku yaboohday in ay gargaar u dirayso dhul ka baxsan xuduudeeda.
Somaliland oo ah dal yar oo aan dhaqaale haysan oo iyada lafteeda ay saamaysay abaarta jirtaa, ayaa waxa ay arrintani noqonaysaa mid weyn oo wax ku ool ah in ay istaagto kaalin ay ku caawiso Soomaaliya. Taasi oo ay Somaliland gaadhay iyada oo aanay beesha caalamka jirin cid si rasmi ah u aqoonsatay, isla markaana aanay helin kaalmo caalami ah, taasi oo ka dhigaysa wax runtii la yaab leh.
Jariidada ‘Guardian, waxa ay sharaxaad ka bixisay sida ay guusha Somaliland ku timid, waxayna daabacday in wax qabsigani yimi iyada oo aanay helin taageero shisheeye, taasina waxay u aanaysay in ay tahay sababta keentay guusha in ay isku tashato. Waxa ay soo qortay in ay ka hirgelisay nabad, degganaansho iyo dimuqraadiyad gobol ay ku yar tahay arrimahaasiba.
“Waxa xaqiiqo ah in aanay dawladdu marnaba helin kaalmo dibadeed. Sababta oo ah dawladda Somaliland ma heli karto waddo ay ku maalgeliyaan baanka Adduunka, hayadda lacagta (IMF), iyo qaadhaan-bixiyayaasha kale ee waaweyn. Masuuliyiinta dawlada waxa lagu qasbay in ay kala xaajoodaan taageerada maaliyadeed hoggaamiyayaasha bulshada iyo ganacsatada. Kaasi oo uu ka dhashay haykal dawladeed oo shaqaynayaa, oo qarankani kaga soo dabbaashay qalalaasaha siyaasadeed.
Waxa kale oo jariiradu soo qaadatay in ay isku tashiga Somaliland ay ka dhasheen doorashooyin iyo dimuqraadiyad ka tilmaaman dunida oo xataa tartankii madaxtooyada mar lagu kala baxay 80 cod oo keliya, iyada oo aanay ka dhicin wax rabshad ahi.
Wargeyska “Guardian’ ugu dambayntii waxa uu xusay in ay jiraan dalal badan oo dakhligooda ugu buurani ka yimaado gargaar, waxaanu qoray in ay jiraan 16 dal oo ka hooseeya saxaaraha oo saamiga kaalmada dibadeed ee maaliyadda dawladahoodu ka badan yahay 50%, iyada oo 10 ka mid ahna saamigaasi uu ka sareeyo 75%, taasi oo macnaheedu yahay in ay afar dalool saddex dallool ay ku tiirsan yihiin kaalmo dibadeed.
Previous PostMadaxweyne Siilaanyo oo dhambaal tacsi ah u diray qoyskii Marxuum- Aadan Cabdi AbyanNext PostKu simaha Wasiirka Daakhiliga oo Kormeer ku soo maray Suuqyada Cidhiidhiga ah ee Hargeysa	Blog